လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #358 by Gh0stRider203
ငါသင်တောင်းတဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်အစီအစဉ်ကို load အခါ OBNOXIOUS တောင်းဆိုမှုကို disable လုပ်ဖို့တချို့လမ်းရှိတယ်မျှော်လင့်တယ် "သင်လေယာဉ် Simulator လေယာဉ်အစီအစဉ်အပေါ်ဖော်ပြထားသောထွက်ခွာလေဆိပ်ရန်သင့်လေယာဉ်များရွှေ့ချင်ပါနဲ့။ "
သူတို့ထဲကအားလုံးငါပိုင်ဆိုင် VA သို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏ကတည်းကအားလုံးအကြှနျုပျ၏ပျံသန်းမှုခြေရာခံနေကြသည်။ ကောင်းပြီ, ငါ IFR မှ VFR ကနေပြောင်းခဲ့ငါ့လက်မတော်တဆယခုလျှင်ငါသည်ငါ့မြည်းကိုငါအလေးအနက်ထားကိုယ်ရောစိတ်ပါတွေဆီကနေဆိုလိုတာက ..... အဆိုပါငါ့ကိုများနှင့်လေယာဉ်အချိန်တစ်ခုလုံးကိုတစ်ရက်ရဲ့တန်ဖိုးရှိကုန်ကျခြင်း, ဝေးညာဘက်ခလုတ်ကိုထည့်သွင်းပေါ်ဆင်းသက် ပင်လပျံသန်းမိုင်ဦးဆောင်များတွင်တည်းခိုတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့ချင်တယ် ....
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #416 by Colonelwing
ငါအရမ်းရယ်ရတယ် ,,, အလုပ်အကြောင်းမရှိ၏ alote တစ်ဦးအရက်မူးလက်ညှိုး ,, သင့်ရဲ့နာကျင်မှုခံစားရ
ငှားရမ်းမှာရှိသမျှသည်အခြားသော9လက်ချောင်းများ ,, သူတို့ရဲ့ပျံအလုပ်အကိုင်အညာဘက်လုပ်နေခဲ့ကြသလဲ ,, Eh? ,,, ဟားဟား
9 ထဲက 10 အပေါ်ကောင်းတစ်ဦးအရာ Hacking ကို ...
အပြုသဘောကသိမ်းဆည်းထားပါ ,, အဆိုပါ AA ကိုခရီးသည် Mate သင်တို့အပေါ်မှာရေတွက်ကြသည်!
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #421 by Gh0stRider203
ကြောင်းကို $ စေသည်ဘာအဖြစ်အရမ်းရယ်ရတယ် oh ငါအများအားဖြင့်ယခုကုန်တင်ပျံသန်း နီးပါး 560K NET အတွက် 747-LCF အတွက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်အရမ်းရယ်ရတယ်
ငရဲ, 65 ပိုပြီးပျံသန်းမှု, ငါနောက်လဖြစ်ကောင်းဤအချိန်လောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့2777-200LRs ဒါ ... တဦးကိုချွတ်ပေးချေရန်လုံလောက်သောရှိသည်လိမ့်မယ် ....
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #426 by Colonelwing
သို့သော်သင်သည်ငါ၏စာအုပ်ထဲတွင်တန်ဖိုးဖြတ်မရသောပု Stuard အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ချိုမြိန်အာရုံစူးစိုက်မှုကို & သူတို့ရဲ့အကြီးအကော်ဖီမုန့် ... လက်လွတ်!
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #428 by Gh0stRider203
ငါသည် taxiing ချွတ်ယူပြီးသို့မဟုတ်လေယာဉ်ဆင်းသက်တာပါမဟုတ်လျှင် LOL ငါပင်ငရဲအရမ်းရယ်ရတယ်ငါအခြားပစ္စည်းပစ္စယပြုပါစဉ် FSX ့နောက်ခံပြေးသည်အချိန်ဆုံး ATC အာရုံစိုက်ကြပါဘူး။
0.220 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်